Wasiirka Cusub ee Maaliyada Puntland oo Xilka La Wareegay (SAWIRRO/ MUUQAAL) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Wasiirka Cusub ee Maaliyada Puntland oo Xilka La Wareegay (SAWIRRO/ MUUQAAL)
Wasiirka Cusub ee Maaliyada Puntland oo Xilka La Wareegay (SAWIRRO/ MUUQAAL)
February 17, 2019 - By: Horseed Team
Wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyada dowladda Puntland Xasan shire Cabdi (Abgaal) ayaa maanta xilka kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradaasi Cabdulaahi Siciid Carshe.
Munaasabada xilwareejinta oo ka dhacday xarunta wasaaarada ee Garoowe waxaa ka qaybgalay wasiiro ku-xigeenada iyo wasiiru dowlayaasha xilka la kala wareegayay, agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyada, shaqaalaha wasaarada maaliyada iyo guddi uu madaxweynuhu u xilsaaray inay goobjoog ka noqdaan wasiirada xilka la kala wareegaya.
Agaasimaha guud ee wasaarada Cabdirisaaq Maxamed xasan oo ugu horrayn munaasabada ka hadlay waxaa uu sharaxaad ka bixiyay qaybaha ay ka kooban tahay wasaaradda maaliyada iyo sida ay u shaqayso. Sidoo kale waxa hadalo dardaaran u badnaa munaasabada ka jeediyay wasiir dowlihii hore ee wasaaradda Maxamuud Faarax Beeldaaje.
Cabdullaahi Siciid Caarshe, wasiirkii hore ee maaliyada ayaa bogaadiyay, una mahadceliyay masuuliyiintii iyo shaqaalihii la soo shaqeeyay mudadii 19 bilood ahayd ee uu xilka wasaarada hayay, waxaa uu ka sheekeeyay waxyaabihii u qabsoomay, caqabadihii uu la kulmay iyo xaalada guud ee wasaaradda Maaliyadda Puntland.
“Waxaanu la kulanay marxaladi adag oo ay ka mid tahay dhaqaale yari iyo dadlka uu gudo iyo dibadba laga difaacayay, arrimahaasi waxay sababeen miisaaniyadii dowladda oo isku dheeli tirnayd oo dakhli kharash ahayd in lagu dhaqmi waayo, taasna waxaa keenay culaysyadii dalka ka jiray” ayuu yiri wasiirkii hore ee Maaliyada Puntland.
Wasiirkii Hore ee Maaliyada Puntland Cabdullaahi Siciid Carshe
Wasiirka cusub ee wasaarada maaliyadda Puntland Xasan shire Abgaal waxa uu sheegay in mudnaanta kowaad uu siin doono kor u qaadida dakhliga iyo bixinta musharaadka shaqaalaha iyo ciidamada.
“hadii aan dalka dhan Dahab ka dhigno oo aan bixinwayno muhashaharka shaqaalaha iyo Ciidamada waxba lama qaban hadaba markii musharka Ciidamada iyo shaqaalaha labixiyo ayaa horumar loogudbi karaa” ayuu yiri Wasiir Xasan shire
wuxuu ugu baaqay ganacsatada iyo shacabka Puntland inay bixiyaan lacagaha cashuuraha ee ku waajibay.
“shirkadaha waawayn ee ganacsi waxaan leenahay iyo Shacabka ay cashuurtu ku waajibtay bixiya Cashuurta si aynu hurumar ku gaarno”
Wasiirka Cusub ee wasaaradda maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal
Gabagabadii, Wasiirka cusub oo uu weheliyo wasiirkii hore waxay kormeeray xafiisyada wasaarada iyagoo wasiirka la baray masuuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyada. Waxaa kaloo wasiirka cusub lagu wareejiyay baabuurtii iyo Dokomintiyadii wasaaradda.
Wasiirka cusub ee maaliyada ayaa muddo 20 sanno ah wuxuu ka soo shaqaynayay wasaaradda caafimaadka Puntladn, isagoo ahaa agaasimihii waaxda maamulka iyo lacagta, sidoo kale wuxuu muddo kooban ka soo shaqeeyay wasaarada xanaanada xoolaha.